Help:Contents/Fedhii Kiyya (My Prefrence) - Wikipedia
Help:Contents/Fedhii Kiyya (My Prefrence)
1.1 E mailii
User Profile[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Maqaa nama Fayyadamu: maqaan kunii maqaa atti yoo log-in/sentuu kenitee dha. Maqaa kana jijjiru hin dandentu.
User ID: Kuniin kan sii kennamu akkanumatti yoo ta'u, waan atii fillachu dandettu miti.
E-mail: Kuni electronic-mailii atii yeroo log-in tatuu kennitee dha. Kana kenuun dirqama miti, garuu yoo kana kenitee wikipedia kana irratti nama biraa wajjin walii-barresuu ni dandetta.
Maqqa mana yokan bira: Kunii akka nickname kan kettit tajajilla. Haa ta'u malee kana qabachuun dhibaa fidu danda'a. Kunis yoo faramtuu maqaa kankee log-in itti tatte osoo hin ta'in maqaa kanatti dhufaa, kuni immo akka namii enyumma kankee bekku hin dandenne sii godha.
Raw signatures (without automatic link) - Kana fillachuun garii mitii, maliif?, kunis firmaa kankee fayyadame akka namii si barresuu hin dandenne si godhaa. Fakkena yoo bakka kana hin fillane kan akkanatti dhufaa [[user:adda]] sa'a guyya wagga yoo hin fillane garuu kan akkanatti dhufaa user:adda sa'a guyya wagga.
E mailii[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Barrefamii duraa jirru e-mailiin kankee yomii akka fudhatame jiruu agarsisaa.
Box 1ffa - Kana fillachuun akka nami e-mailii sii gochuu danda'u tasisaa.
Box 2ffa - Kana fillachuun akka kopiin e-mailii nama ergitte akka argatuu si dandesisaa.
Gogga[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Kuni fakki wikipedia kankee jijjira, haa ta'u malee bakka hundatti wikipedian kana fakkata jechuu miti, kuni sii qofaaf. Fillachuuf circle tuqaa, ilaluuf immo (Preview) kan jedhuu tuqaa. Ergaa xumurtanii bodaa save tolchaa. Yoo akka qarra jirutti debisuu fetaan Reset tuqaa.
Herrega[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Kuni kan tajajilamuu yerro formulan herrega barrefama kessatti fayyadamu dha. Ammaf akkuma jiruutii dhisuun barbachisaa dha. Wa'ee barrefama herrega ilaluuf kana bana. Yoo jijjirtanii garuu save godhaa. Yoo akka qarra jirutti debisuu fetaan Reset tuqaa.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Help:Contents/Fedhii_Kiyya_(My_Prefrence)&oldid=29809" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 22 Fulbaana 2017, sa'aa 22:07 irratti.